Topimaso ny fametahana rojom-bidy - Pandawill Technology Co., Ltd.
Topimaso ny fametahana rojom-bidy
Anisan'ireo vokatra amboarinay, 80% amin'ny sandan'ny vokatra dia azo ateraky ny BOM (Bill of Material). Izahay dia mandrindra ny faritry ny famatsiana manontolo mifanaraka amin'ny fepetra mavitrika ataon'ny mpanjifanay sy ny politikany, ka raisinay ireo anton-javatra toa ny ambaratonga takiana amin'ny fanamorana sy ny fanatsarana ny lisitra. Pandawill dia mampiasa ekipa mpamatsy vola sy fizarana voatokana ho an'ny fitantanana logistika sy fividianana singa miaraka amin'ny rafitra fanangonam-bidy efa voafehy sy voasedra ara-potoana izay manome antoka ny fizarana faritra elektronika tsy misy kilema.
Rehefa mahazo ny BOM avy amin'ny mpanjifantsika, ireo injenierantsika efa za-draharaha dia hijery ny BOM:
>Raha mazava ny BOM ahazoana teny nindramina (isan'ny fizarana, famaritana, sanda, fandeferana sns)
>Manolora tolo-kevitra miorina amin'ny fanatsarana ny vidiny, ny fotoana itarihana.
Izahay dia mikasa ny hanana fifandraisana maharitra sy fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka mpamatsy antsika ankatoavin'izao tontolo izao hahafahanay mampihena hatrany ny vidin'ny fahazoana sy ny fahasarotan'ny famatsiana ary mbola mitazona ny kalitao avo indrindra sy ny fandefasana.
Ny programa fitantanana fifamatorana fifandraisana (SRM) mahery sy feno ary rafitra ERP dia nampiasaina hanarahana ny fizotry ny fizarana. Ankoatry ny fifantenana sy fanaraha-maso henjana ny mpamatsy dia nisy ny fampiasam-bola be ho an'ny olona, ​​ny fitaovana ary ny fampandrosoana ny fizotrany mba hahazoana antoka ny kalitaony. Manana fanaraha-maso henjana izahay, ao anatin'izany ny X-ray, mikraoskaopy, mpampitaha herinaratra.